Iimveliso zeendevu: yonke into oyifunayo ukuze unakekele iinwele zakho zobuso | Amadoda aQinisekileyo
Imveliso yeendevu sisigaba sokugqibela seenwele zobuso. Kuqala kuza ukhetho lweyona ndlela ifanelekileyo yobume bobuso kunye nolondolozo.
Kodwa ukuba kwindawo yokugqibela akuthethi ukuba ababalulekanga. Inyaniso, ukhathalelo lweenwele zobuso kubalulekile ukufumana eyona nguqulelo inokwenzeka yeendevu zakho.
1 Iindevu ishampu
2 Isimo seendevu
3 Ioli yeendevu
4 Iindevu yamafutha
5 Ikama yeendevu
6 Emva kokutsheva
7 Isilevu kunye nesikere samadevu
Njengeenwele, iindevu ziqokelela ukungcola. Ke, ukuyigcina ikwimeko entle, kufuneka uyihlambe ngamaxesha athile. Amanzi afudumeleyo anokungonelanga ukubuyisela iinwele kwimeko yazo yendalo, ngelixa ezinye iishampu eziqhelekileyo zinokusebenza, kodwa zingasebenzi njengenye eyenzelwe ngokukodwa iindevu. Ukongeza, kuyaqwalaselwa ukuba banokuba neziphumo ebezingalindelekanga, ezinjengokucaphuka.
Cinga ngokubandakanya a ishampu yeendevu kwinkqubo yakho yezempilo. Yisebenzise ngokulandela amanyathelo afanayo naxa uhlamba intloko. Beka inani elincinci ezandleni zakho kwaye uliphulule kakuhle kuwo wonke umphezulu weendevu. Qiniseka ukuba ingena nakwisikhumba esingaphantsi. Yiyeke imizuzu embalwa kwaye uhlambe ngamanzi amaninzi.
Ityala elifanayo njengeshampu. Xa kuziwa ekulungiseni iindevu zakho, yinto efanelekileyo yokufumana i-beard-conditioner kuphela. Umsebenzi wayo kukushiya iindevu zinenkangeleko efanelekileyo (ukwanda kokuqaqamba yenye yeenzuzo zayo eziphambili) kwaye ulungele isitayile esingatsaliyo. Indlela yokuyisebenzisa ngolu hlobo lulandelayo: kuqala sebenzisa ishampu yentshebe. Emva kokuhlanjwa, lixesha lokuba kulungiselelwe imeko. Faka isicelo, shiya okwemizuzu embalwa kwaye uphinde uhlambe kwakhona.
Ungayithenga ishampu kunye nesiqinisi ngokwahlukeneyo okanye uye kwi 2-in-1 iindevu ishampu kunye conditioner njengale inikezelwa ngophawu lweBulldog.
Xa kuziwa kwimveliso yeendevu, yenye yezona zidumileyo. Faka isicelo ioli yeendevu kuluncedo kuzo zombini iindevu kunye nolusu. Ukongeza ekuthinteleni iinwele zingomi kwaye zome. Gcina ulusu ngaphantsi kwe-hydrated kunye nokuphelisa ukurhawuzelela okukruqulayo.
Ukuthambisa ulusu kubaluleke kakhulu xa unxibe iindevu. Kwaye ukuba iinwele zobuso zithande ukonakalisa ukufuma komphezulu wolusu, ezinokuthi zishiye zomile, ziqinile kwaye, kwezinye iimeko, ziyabhabha (njenge-dandruff entloko kodwa ezindevini). Ngethamsanqa, ioyile ye-ndevu iyanceda ukugcina konke oko kujonge. Yintoni egqithisile, kufuneka songeze ukukhanya kunye nevumba elifanelekileyo abalibonelelayo.
Xa usebenzisa le mveliso, unokuyiphulula ngokulula nangeentende zakho okanye usebenzise iindevu ukuyihambisa. Kuyo nayiphi na imeko, kufuneka kuqinisekiswe ukuba ingena ngokuchanekileyo kulusu oluphantsi kweendevu, kunye nokuba inxibelelana kakuhle nazo zonke iinwele, into enokuncedwa yikama.
Ukufumana okuninzi kwioyile yakho yeendevu, cinga ukuyisebenzisa ngokukhawuleza emva kokuhlamba. Isizathu kukuba oku kugcina ukufuma okungaphezulu okuveliswa ngamanzi.
Injongo ye iindevu namafutha iphantse yafana naleyo yeoli. Kusebenza ukugcina zombini iinwele zobuso kunye nolusu phantsi kokondla, kunye nokongeza ukukhanya kunye nevumba kwiindevu. Nangona kunjalo, ukuba nzima, uncede ekubumbeni nasekulungiseni iindevu ngcono.
Enkosi kwii-wax zayo kunye neebhotile, le mveliso licebo elihle ekubumbeni iindevu eziphakathi nezide. Nangona kunjalo, onke amadoda aneendevu ngokubanzi anokuxhamla kubo iimpawu zokuthambisa kunye nokuguda ngokungalawulekiyo okutshixileyo kuzo zombini iindevu kunye nemadevu.
Iintsumpa zeendevu zisebenza kakuhle kakhulu xa kuziwa lawula iindevu ngokuthanda kwamaza kunye nokoma. Nangona awudingi ukuba nentshebe eneenkani ukusebenzisa esi sixhobo. Njengakwezinye iimveliso, onke amadoda aneendevu ngokubanzi anokuzuza lukhulu kukuxubha rhoqo.
El Akukho mveliso ifunyenweyo Isitshixo sokwenza iindevu eziphakathi nezide kunye nokucheba iinwele kunye ukunceda ukusasaza iimveliso ezinesondlo njengeoyile kunye nebalms.
Indima yasemva koku vala pores kwaye uthintele ubomvu nosulelo kwezo ndawo apho isitshetshe sokucheba kombane sicinezele kakhulu kulusu.
Ngumbono olungileyo ukuba ne- udumo emva kwizixhobo zococeko Nokuba uchebe iindevu okanye unentshebe epheleleyo kwaye kufuneka uyichebe rhoqo. Xa isetyenziswa ivelisa ulwazelelo oluncinci lokuhlaba. Ukuba ayihambi kwangoko, unokufuna ukutshintshela emva.
Isilevu kunye nesikere samadevu
Uninzi lweemveliso zeendevu kufuneka zihlaziywe rhoqo, ngelixa ezinye zinokuhlala ubomi bonke. Inkqubo ye- intshebe yentsimbi kunye nezikere zamadevu Baza kukunceda uzobe imigca oyifunayo, ugcine ulingano kunye nokucheba ezo nwele zingalawulekiyo. Zisebenzise ngoncedo lweendevu zeelevu nanini na ubona kufanelekile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iimveliso zeendevu
I-Presbyopia kunye ne-hyperopia Ziyintoni kwaye ziphathwa njani?